Windows 10 irikuwana 'Mashandisiro Ekushandisa' zvigadziriso zvemunhu
In 2020, Microsoft yakatanga kuyedza yakagadziridzwa OOBE (kunze kwebhokisi ruzivo) sikirini ine zvitsva sarudzo yekubatsira vashandisi kumisikidza yavo nyowani kana yekare chishandiso mushure Windows 10 ficha inogadziridza.
Iyo kambani ichiri 'kuongorora' zano uye rinotaridzika senge Zvirongwa app iri kuvandudzwa neiyo nyowani 'Yekushandisa Chishandiso' chikamu kubatsira vashandisi kugadzirisa yavo kifaa mushure mekunge vasiya OOBE skrini.
Panguva ino, hazvizivikanwe kuti nyowani 'Yekushandisa Chishandiso' marongero achashanda sei nekuti inopaza mukutarisa inovaka. Sarudzo yacho inowoneka pasi peiyo 'Yekuita' peji reiyo Zvirongwa app, saka zvakachengeteka kufunga kuti Microsoft haisi kushanda paGoogle's Dhijitari Wellbeing-senge ficha yeiyo OS.
Mufananidzo Kutendeseka: Albacore (Twitter)
Panzvimbo iyoyo, zvinoita sekunge iyo nyowani Yekushandisa Chishandiso skrini inobvumidza vashandisi kuve nehurongwa hwavo hwakaenderana zvakanyanya nezvavanoda ivo pachavo Iyo 'Yekushandisa Chishandiso' peji iri mukati codenamed 'ZvirongwaUserIntentPage', iyo zvakare inoratidza kuti iyo Kusevenzesa Kusevenzesa kweMidziyo kwakabatana neiyo nyowani OOBE chiitiko.
Kana iyo nyowani maseturu peji iri zvechokwadi yakavakirwa pane iyo OOBE chiitiko uye yedu dzidziso iri chaiyo, vashandisi vanozokwanisa kutora iyo huru yekushandisa chikamu chemushini wavo. Aya anotevera 'mashandisirwo ekushandisa' echikamu anozopihwa pakutanga:
Kana ukasarudza 'Kubhejera', Windows 10 ichave yakagadzirirwa kukwikwidza, asi hazvina kujeka kuti iyo 'optimization' ichashanda sei uye neshandukoi dzinozoitwa kune yako system.
Izvo zvakare hazvizivikanwe kana chimiro ichi chichaverengerwa mune inotevera hombe chinhu chinogadziridza 'Sun Valley'.
Sezvatakambotaura pakutanga, Microsoft haina chivimbo chakazara nezve maficha avanotarisa mukutarisa anovaka uye ivo vari kungoongorora iro zano.
Iyi itsva 'Yekushandisa Chishandiso' shanduko yakaunzwa ne Windows 10 Vaka 21313, kunyangwe ziva kuti inogona kupihwa simba kushandisa wechitatu-bato maturusi chete.
The post Windows 10 irikuwana 'Mashandisiro Ekushandisa' zvigadziriso zvemunhu yakatanga kutanga Windows tsva